တရုတ်နိုင်ငံသို့ဗီဇာလျှောက်ထားပါ (Canton Fair မှထုတ်ပြန်သောဖိတ်ကြားစာသည်သင့်အားတရုတ်ဗီဇာရရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ သို့သော်သင်၏နိုင်ငံရှိတရုတ်သံရုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်)
Express Channel မှ Fair အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးအခမဲ့ဝင်ခွင့်တံဆိပ်ကိုရယူပါ
ပြည်ပမှ ၀ ယ်သူများသည် Canton Fair သို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည် -
By အကောင်းဆုံး (၀ ယ်သူ E-Service Tool)
ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် Canton တရားမျှတသော Call Center, တရုတ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ရေးစင်တာ
ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ဒေသရှိ PR တရုတ်၏စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအကြံပေးရုံး (PR ကောင်စစ်ဝန်ရုံး၏စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပိုင်း)
Canton Fair ဟောင်ကောင်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် (၈၅၂) ၂၈၇၇၁၃၁၈
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ဆက်စပ်နေပါတယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်
(အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖိတ်ကြားချက်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးချယ်မှု ၂.၃.၄.၅,2.3.4.5,6 (သို့) အေဂျင်စီတစ်ခုမှဗီဇာလျှောက်ထားပါ။ )
ငါ Canton တရားမျှတသောသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်တရုတ်ဗီဇာလိုအပ်ပါသလား?
မရှိသောနိုင်ငံများမှမည်သူမဆို တရုတ်နိုင်ငံ၏ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်မူဝါဒ၊ ကျေးဇူးပြု၍ တရုတ်ဗီဇာ (မည်သည့်အမျိုးအစား၊ အများအားဖြင့် "M") နှင့်မဆိုလျှောက်ထားပါ အဆိုပါ Canton ပြပွဲမှဖိတ်ကြားချက်ကို သငျသညျတရုတ်ကိုသွားမီ။
အဆိုပါသံရုံးက သို့မဟုတ်သင်၏နိုင်ငံရှိ PRChina အထွေထွေကောင်စစ်ဝန်ရုံး (Overseas Missions) ။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးပေမယ်ပိုက်ဆံနည်းတယ်။
ဒေသခံခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဇာအေဂျင်စီ။ ၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သံရုံးသည်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင်ကျွမ်းကျင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုမကြာခဏကူညီလိုသည်။
72/144 နာရီ Transit ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်မူဝါဒ။ (၇၂ နာရီ Transit Visa ကင်းလွတ်ခွင့်ပေါ်လစီအပေါ်မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ)
တရားဝင် Canton Fair ဖိတ်ကြားချက်တွင် ၀ ယ်သူ၏အမည်၊ နိုင်ငံသားနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုသာဖော်ပြထားသည်။ အများအားဖြင့်တရုတ်စက်ရုံများ (သို့) နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းများမှဖိတ်ကြားချက်သည်တရုတ်ဗီဇာလျှောက်ထားမှုများအတွက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုသင့်သည်မှာ Canton Fair ၏ဖိတ်ကြားချက်သည်သင့်အားတရုတ်ဗီဇာရရှိရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်သော်လည်းသင့်နိုင်ငံရှိတရုတ်သံရုံးပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
ဟောင်ကောင်, မကာအိုမှတရုတ်ပြည်မထားခဲ့ပါနှင့်ကွမ်ကျိုးမှပြန် လာ. , multi-entry ကိုဗီဇာလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဖို့လိုအပ်သူကိုဝယ်လက်။
ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် Canton Fair အတွက်တရားဝင်လက်မှတ်ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Now!
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (ပြည်ပနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ HK / Macau နေရပ်ပြန်ခွင့်၊ ထိုင်ဝမ်အဝေးပြေးခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်၊ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်အဖြစ်သက်တမ်းရှိ၊ သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတစ်နှစ်အထက်ဗီဇာရှိသောတရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်);
အဆိုပါတံဆိပ်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည် ဆုံးရှုံးမှု (သို့) မေ့ခြင်းကြောင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းသည် 200RMB ကျသင့်မည်။ ကြင်နာစွာဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်လော့။
ပြန်လည်လျှောက်ထားပြီးနောက်အမှတ်အသားအဟောင်းသည်မမှန်ကန်ပါ။ သင် ၀ တ်ထားသောတံဆိပ်သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
(တောင်းဆိုသောစာရွက်စာတမ်းအားတင်ပြခြင်းအပြင် ၀ န်ဆောင်ခ ၃၀၀ နှင့်ကဒ် ၃၀ ယွမ် /ကတ်ပေးဆောင်ရပါမည်။ ပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်ပြည်တွင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သာခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းအားဆွေမျိုးပြည်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ၀ ယ်သူများကလက်မှတ်နှင့်အတည်ပြုပေးရမည်)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်း။ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခရီးသွားလက်မှတ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (China Passport မဟုတ်)၊ ဟောင်ကောင် / မကာအိုအိမ်ပြန်ခွင့်လက်မှတ်၊ ID ကဒ်၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားခရီးသွားလက်မှတ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတရုတ်များအတွက်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်တရားဝင်နိုင်ငံရပ်ခြားအလုပ်အကိုင်ဗီဇာရှိသောတရုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါ ၀ င်ပါ။
ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံ 5cm X 4cm (သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပိုက်ဆံကုန်ကျ) ။
Buyer Card သည်ဤပြပွဲသို့တရားဝင် ၀ င်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး China Import and Export Fair Complex တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေရန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်ယခုအခါနိုင်ငံခြားသား ၀ ယ်သူများ၏မှတ်ပုံတင်ရုံး (၃၁) ကိုခန့်အပ်ထားသောဟိုတယ်များတွင်ထားရှိသည်။ ထို့အပြင်မနက် ၉း၃၀ မှမွန်းတည့်ချိန်အထိ China Import and Export Fair Complex ရှိဟိုတယ် ၃၁ ခုတွင် Canton Fair ဝင်ခွင့်တံဆိပ်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤဒေသများအနီးတွင်နေထိုင်သော ၀ ယ်သူများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဟိုတယ်များတွင်လည်းမှတ်ပုံတင်ပါ။